Jeremy Hunt Oo Noqday Xoghayaha Cusub Ee Arimah Dibadda dalka Boqortooyadda Ingiriiska – Heemaal News Network
Magacaabida wasiirka cusub ayaa timid, kadib markii Boris Johnson uu sheegay in uusan la dhacsaneyn qaabka Theresa May ay u wajaheyso ka bixida Midawga Yurub, waxaana uu noqonayaa mas’uulkii labaad ee iscasila muddo gaaban. Waxaa horay isu iscasilay Mr David Davis oo Britain u qaabilsanaa wadaxaajoodka ka bixitaanka Midowga Yurub oo xilkan loo magacaabay sanaddii 2016 dii.
Sacuudiga Oo Ku Gacan Saydahay Maraykanka Iyo Ingiriiska Oo Waday Qorshe Lagu Dhexdhexaadinayo Canada
Dhaxal Sugaha Boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman, ayaa qaadacay qorsho lagu doonayay in lagu dhex dhexaadiyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo dowlada Canada. Bin Salman, ayaa diiday in dowladiisa ay miiska wadahadalka la fadhiisato Canada, isagoo […]
Booliska Ingiriiska Iyo Waaxda Caafimaadka Oo Ka Hadlay Dad kale Oo Lagu Sumeeyey Wiltshire
Police-ka UK ayaa waxaa ay shaaca ka qaadeen Baaritaandii La Xiriiray Lamaane ku sumoobay degaanka Wiltshire oo Saacadihii La soo Dhaafay ay Baaritaanadooda ay socdeen. Saraakiisha u hadashay ciidamada amniga oo kaashanaya Waaxda caafimaadka ee […]
Ma Doonaayo In Aan Ku Ag Fadhiisto, Waxaad Tahay Qof Fool Xun Oo Madow Liita Ah
Duulimaad ay ku kala samaynaysa diyaarad ay leedahay shirkada duulimaadyadda ee Ryanair magaalooyinka Barcelona iyo London, ayaa lagu aflaagaadeeyey haweenay madaw ah. Nin cadaan ah ayaa cay dabada u qabtay haweenay madow ilaa ugu danbaytii […]